Shirkadda Golis oo qaaday Imtixaanka 2 Boos oo ah Procurement iyo Asset Control | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo qaaday Imtixaanka 2 Boos oo ah Procurement iyo Asset Control
Shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom Somalia ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 16/01/2016 imtixaan ka qaadday dad soo codsaday labo boos oo ka banaan waaxda supply chain-ka shirkadda Golis kuwaas oo kala ah Procurement iyo Asset Control.
Imtixaankan ayaa ka duwanaa imtixaanadii hore ee shirkaddu ku qaadan jirtay shaqaalaha cusub waxana u fariistay in kabadan 80 dhalinyaro shaqado doon ah iyadoo lagu qabtay hoolka imtixaanaadka ee jaamacadda Muqdisho faraca magaalada Boosaaso.
Qaar kamid ah masuuliyiinta shirkadda Golis ayaa goob joog ahaa hoolka Imtixaanka lagu galayay iyagoo la hadlay aqoonyahanadii soo codsaday inay buuxiyaan jagooyinka shaqo ee ka banaan shirkadda.
Madaxa Shaqada iyo shaqaalaha Shirkadda Golis Cismaan Abshir Nuur ayaa kula dardaarmay dhalinyaradii u fariisatay imtixaanka inay naftooda ku kalsoonaadan isagoo xusay in shirkaddu ay shaqo walba oo banaan u bandhigto qof walba oo aqoonteeda leh si cadaalad ahna ku qaadato qofkii kusoo baxa imtixaanaanka la qaado.
Madaxa waaxda Supply Chain-ka shirkadda Golis Maxamed Mire Axmed ayaa dhankiisa xusay inay rajaynayaan in labada qof ee ugu mudan boosaska banaan ay kusoo baxaan islamarkaana uu kusoo dhawayn doono shirkadda.
Si kastaba ha ahaatee shirkadda Golis Telecom Somalia ayaa ah shirkadda ay ka shaqeeyaan shaqaalaha ugu badan guud ahaan Puntland marka laga hadlayo hay’adaha iyo shirkaddaha gaarka loo leeyahay waxayna sanad walba qaadataa shaqaale cusub oo hor leh, arintaas oo tusaale cad u noqonaysa doorka ay ka qaadatay shaqo abuuris iyo mustaqbal ifaya oo ay helaan jiilka wax bartay ee ku sugan dalka.